Waliigaltee waa'ee baqattoota biyyatti deebisuu paarlamaan Awuroopaa mootummaa itoophiyaatin walii - Online petition
Gamtaan Awurooppaa mootummaa Itoophiyaatin walii galee baqattoota Itoophiyaa biyyoota awurooppaa gara garaa keessa jiraatan gara biyyatti deebisuu akka barbaadu fi akkaatuma 15496/17 MIGR 229 COAFR 323 walii galuun ni yaadatama. Nuti Jarmaniin dhimma walii galtee kana fudhachuu akka didduu fi mallatteessuus akka hin qabne , akkasumas qaamolee biroo dhimmi kun hojirra akka ooluf tattaafatan irrattis dhiibbaa akka uumtu kabajaan gaafanna. Kana malees, jarmaniin cabiinsa mirga namummaa yeroo amma Itoophiyaa keessatti ta’aa jiru haala qabatamaa ammaa sababa godhachuun dhimma qorannaa baqattoota Ittoophiyaa karaa sirrii ta’een akka ilaaltu gaafanna. Akkasumas lammiileen kola galtummaan as jiraatan kunniin carraa hojii walqixaa akka argatan kabajan gafaanna.
Balballoomsa Dookumentiin 15496/17 MIGR 229 COAFR Paarlamaa gamtaa Awurooppatiin gaafa guyyaa 06.12.2017 maxxaanfame akka jedhutti, baqattoonni Itoophiyaa waraqaan ittiin gara biyyatti deebi’an karaa embaasii itoophiyaatin yeroo gabaabaa keessatti xumurameefii, mootummaa itoophiyaa waliin walii galuun namoonni gara biyyaatti deebifaman kunniin immoo carraan hojii gaariin uumameefii biyyaatti akka deebifaman kan ibsuudha. Kun immoo sarbamiinsa mirga dhala namaa amma biyyattii keessatti adeemaa jiruun walfaallessa, sababni isaas Awuurooppaarra baqattoota deebifamaniif tajaajilli haqa qabeessa hin godhamuuf. Inumaa namoota deebi’an kana hidhaa, dararaa fi du’atu isaan eeggata. Sababa kana ta’eef,baqattoota asii kana immoo mootummaa Itoophiya amananii gara biyyatti deebisuun immoo wabii homaatuu hin qabu. Haalli amma biyyattii keessaa jiru immoo daran yaaddessaa ta’eera.keessattuummoo erga muummichi ministeera Hayilamaariyaam Dassaaleny gaafa guyyaa 16.02.2018 aangoo gaadhiisanii booda biyyattiin labsii muddamaa ji’aa jahaaf turu ifoomsiteerti. Kunimmoo mirgi lammiilee akka sarbamuu, miidiyaalen hawaasummaa akka bilisa hin taane godha.qaamni nageenya biyyaattii immoo kana dura yeroo nhiriirri gara garaa godhamuu waan hin malle lammiilerratti raawwachaa turuun ni yaadatama. Akka barbaadanitti socho’uu dhabuu dura buutota paartii mormituu dhiheenya kana gadhiifaman
kan akka Dr. Mararaa Guddinaa fi Baqqalaa Garbaa malees namoonnii hedduun ammas mana hidhatti waan aragamaniif, baayyeen tana buuten isaanii dhabamuun fi ajjeeafamuun daran kan sodaachisuudha. Kaaan gadhiisaa kaan immoo bifa haarawan hidhuufi ajjeesun itti fufeera( fkn. Madda walabuu, Hammarreessaa, Waldiyaa fi kkf). Kunimmoo inumaa baayyee yaachisaa ta’eera. Dhimma haala yeroo irratti biiron dhimma alaa jarmanii baase http://www.auswaertiges-amt.de/de/newsroom/aa-aethiopien/160240 ( biyyoonni biro gara garaas kan akka siwidiin fi ameerikaa waan kanarratti waan jedhan qabu) Iyaannaan keenya sarbamiinsa mirga namummaa biyyaatti keessatti ta’aa jiru kan dhaabbanni mirga namoomaa bara 2018 baasees wabii godhateeti. Waan kana ta’eef, lammiileen baqatanii asii fi biyyoota Awurooppaa biroo keessa jiran bakka jiranitti mirga jiraachuu argachuu akka qabaniifi dararaaf hidhaarraa bilisaan akka jiraatan ammas irra deebinee kabajaan isin gaafanna. Haala qabatamaa cabiinsa mirga namumma itoophiyaa keessatti adeemaa jiru ilaalchisee gabaasni HRW bara 2017 baase isa asii gadii kana: https://reliefweb.int/report/ethiopia/world/-report-2018-ethiopia-events-2017
Subject: Waliigaltee waa'ee baqattoota biyyatti deebisuu paarlamaan Awuroopaa mootummaa itoophiyaatin walii
Hello, on openPetition is a petition that might interest you: https://www.openpetition.de/petition/online/petition-77239 Kind regards,